Onye na-eme atụmatụ oge izu ụka nke China, Onye na-eme atụmatụ kalenda, nke na-enye usoro izu
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Nhazi oge n'usoro oge,Onye nlekọta kalenda,Onye na-eme atụmatụ kwa ọnwa,Nhazi oge izu ụka,,
Home > Ngwaahịa > Bọlụ na-ederede > Onye nlekọta kalenda
Ngwaahịa nke Onye nlekọta kalenda , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Nhazi oge n'usoro oge , Onye nlekọta kalenda suppliers / factory, wholesale high-quality products of Onye na-eme atụmatụ kwa ọnwa R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Nchịkọta Nri Maka Izu Izu Na-edozi Whiteboard
Nchịkọta Nri Mebiri Nzuzo Nzuzo
Kwa izu kwa ọnwa na nchekwa nchekwa Kalinda Onye na-emepụta ihe na-eme ka anyị nwee ntụsara ahụ dị mma nke ọma, ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe ide ma hichapụ. Ebube dị mma maka ntọala na friji, jide n'aka na ọ gaghị adị mfe dobe. A na-eme atụmatụ dị iche iche maka ọnọdụ dịgasị iche iche, ụdị ndị ọzọ,...
Nri Nri Nri Anyasị Nri Nri Mbipụta nke obibi akwụkwọ kwa ọnwa, nhọrọ ndị ọzọ , m agba n'ụdị na kalịnda Kalinda anyị . Anyị na-eme PET na magnet. Ebe dị elu nke na-enweghị atụ, ọ bụghị ịkụgharị ma na-ekwu okwu, dị mfe dee ma hichapụ. Ebube dị mma maka ntọala na friji, jide n'aka na ọ gaghị adị mfe dobe....
Magnetic Monthly Calendar Refrigerator Planner Mbipụta na-emepụta ihe na-emepụta kwa ọnwa, ụdị mpempe akwụkwọ , nhọrọ ndị ọzọ na kalịnda Kalinda anyị . Anyị na-eme PET na magnet. Ebube dị mma maka ntọala na friji, jide n'aka na ọ gaghị adị mfe dobe. Ebe dị elu nke na-enweghị atụ, ọ bụghị ịkụgharị ma na-ekwu okwu,...
Nchịkọta Nri Nri Kwa Ụbọchị Nchịkọta Nzuzo Onye na-emepụta ihe na-eme ka anyị nwee ntụpọ dị mma, dị mfe ịde ma hichaa , ọ na-enweghị ihe ọ bụla . Ebube dị mma maka ntọala na friji, jide n'aka na ọ gaghị adị mfe dobe. A na-eme atụmatụ dị iche iche maka ọnọdụ dịgasị iche iche, ụdị ndị ọzọ, nhọrọ ndị ọzọ na kalịnda...
Mbido Nzuzo Nzuzo Whiteboard Month Week Planner Onye na-eme ihe na-eme ka magnet nwere nnukwu ihe magnetik maka ijiri na friji, jide n'aka na ọ dị mfe ịdakwasị. Ebe dị elu nke na- enweghị atụ, ọ bụghị ịkụgharị ma na-ekwu okwu , dị mfe dee ma hichapụ. A na-eme atụmatụ dị iche iche maka ọnọdụ dịgasị iche iche, ụdị...
Nchịkọta Nri Nri Kwa Ụbọchị Nchịkọta Nzuzo Onye na-eme ihe na-eme ka magnet nwere nnukwu ihe magnetik maka ijiri na friji, jide n'aka na ọ dị mfe ịdakwasị. Ebe dị elu na-ekpo ọkụ, dị mfe ide ma hichaa , ọ bụghị ịkwa ákwá na ịkọ . A na-eme atụmatụ dị iche iche maka ọnọdụ dịgasị iche iche, ụdị ndị ọzọ, nhọrọ ndị ọzọ...
Nchịkọta Nri Maka Izu Izu Na-edozi Whiteboard HD-ebi akwụkwọ kwa ọnwa planner, m ore ekwekọghị, nhọrọ ndị ọzọ na kalịnda Kalinda anyị . Eji magnet na PET mee ihe nhazi anyị . Ebube dị mma maka ntọala na friji, jide n'aka na ọ gaghị adị mfe dobe. Ebe dị elu nke na-enweghị atụ, ọ bụghị ịkụgharị ma na-ekwu okwu, dị...
Nchịkọta Nri Mebiri Nzuzo Nzuzo Anyị na-eme PET na magnet. Ebube dị mma maka ntọala na friji, jide n'aka na ọ gaghị adị mfe dobe. Ebe dị elu nke na-enweghị atụ, ọ bụghị ịkụgharị ma na-ekwu okwu, dị mfe dee ma hichapụ. A na-eme atụmatụ dị iche iche maka ọnọdụ dịgasị iche iche, ụdị ndị ọzọ, nhọrọ ndị ọzọ na kalịnda...
China Onye nlekọta kalenda Ngwa
Onye na-emepụta ihe na-eme ka anyị nwee ntụsara ahụ dị mma nke ọma, ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe ide ma hichapụ. Ebube dị mma maka ntọala na friji, jide n'aka na ọ gaghị adị mfe dobe. A na-eme atụmatụ dị iche iche maka ebe dị iche iche, ụdị ndị ọzọ, nhọrọ ndị ọzọ.
T ọ kasị uru bụ elu àgwà nnọọ erasable. L e ewepụla ihe ọ bụla fọduru ma hapụkwa akara ọ bụla mgbe ehichapụchara ya. Enwere ike ihichapu m ọcha mgbe ogologo oge gasịrị. Onye na-emepụta ihe na-eme ka onye na-eme njem na-ere ọkụ dị egwu na amazon. Anyị na ndị ahịa si amazon kwadoro ha ma nwee ezigbo aha ọma.
Nhazi oge n'usoro oge
Onye na-eme atụmatụ kwa ọnwa
Nhazi oge izu ụka
Onye Nhazi oge nhazi oge
Nhazi oge n'usoro oge Onye nlekọta kalenda Onye na-eme atụmatụ kwa ọnwa Nhazi oge izu ụka Onye Nhazi oge nhazi oge